XOG+SAWIRRO: Itoobiya & Puntland oo todobaadkan xariga ka jaraya Suuq cusub oo muhiim ah, Maxaase la gudboon Bulshada Goldogob? – Puntlandtimes
XOG+SAWIRRO: Itoobiya & Puntland oo todobaadkan xariga ka jaraya Suuq cusub oo muhiim ah, Maxaase la gudboon Bulshada Goldogob?
December 17, 2017 W LAASCAANO
GOLDOGOB(P-TIMES) – Todobaadkan wafuud ka socota Puntland iyo dawladda Itoobiya ayaa xariga ka jaraya Suuq cusub oo muhiim u ah ganacsatada labada dhinac, kaas oo laga hirgalinayo Kastamka Tuurdibi ee duleedka magaalada Goldogob ee gobalka Mudug.
Wafdi ka socda dawladda Puntland oo uu hogaaminayo Wasiirka Ganacsiga & Warshadaha Cabdiweli Xirsi Indho-Guran ayaa tagay magaalada Goldogob, si bulshada halkaas loogu wacyigaliyo muhiimada Kastamkan cusub.
Mr, Indho guran ayaa u sheegay Odayaasha iyo waxgaradka deegaankaas in looga baahan yahay dabacsanaan badan iyo tanaasul si loo helo fursaddan wanaagsan.
Wasiirku wuxuu sheegay in Suuqan cusub uu la mid noqon doono, kan Wajaale uuna muhiim u yahay ganacsatada Puntland oo adeegyadooda nasiib u heli doona in ay galiyaan gudaha dalka Itoobiya.
Suuqa cusub ayaa ah mid ay muddo dheer dadaal ku bixinayeen Madaxda ugu sareysa dawladda Puntland, waxaana hadda lafilayaa in si dhaqso ah loo hirgaliyo.
Ra`iisulwasaaraha dawladda Itoobiya ayaa amray bishii November in si deg deg ah wasaaraddaha shaqada ku leh, ay ugu howlgalaan dadajinta qorshaha meelmarinta suuqan cusub.
Wasiiradda dawladda Itoobiya ka socda ayaa lafilayaa in ay gudaha todobaadkan yimaadaan deegaanka Tuurdibi, halkaas oo ay ka furi doonaan Suuqan cusub, taas oo muhiim u ah ganacsatada labada dhinac.
Ganacsatada Puntland ayay u tahay fursad wanaagsan talaabadan lagu hirgalinayo Suuqa cusub, gaar ahaana marka laga hadlayo faa’iidada ay ka heli doonaan.
Waxgaradka & Odayaasha degmada Goldogob oo uu hoosyimaada Kastamkan ayaa laga doonayaa in ay soo dhaweyn wanaagsan u sameeyaan dhinacyada kala duwan ee imaanaya,gaar ahaana ganacsatada ka imaanaysa labada dhinacba.
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa cadeeyey in Suuqan cusub uu fursad maalgalineed u yahay Ganacsatada Puntland, bacdamaa uu yahay mid muhiim u ah ganacsigooda.
XAQUUQDA SAWIRADDA: SICIID NADAARA